Akụkọ - Sdị nwa nke nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe
Mụrụ nwa nke nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe
Ngwa ngwugwu na-agbanwe agbanwe na-ezo aka n'iji ihe dị nro dị ka nnukwu ihe nkiri plastik ma ọ bụ ihe mgbochi igwe na ihe nkiri ha mejupụtara iji mee akpa ma ọ bụ ụdị ihe ndị ọzọ. Iji ahịa aseptic, juru n'ọnụ nri na ike ga-echekwara na ụlọ okpomọkụ. Thekpụrụ nhazi na usoro nka yiri ite igwe maka ịchekwa nri. Ihe nkwakọ ngwaahịa a na-etinyekarị na iko plastik na karama plastik. Akpa nri, igbe, wdg.
Ebe ọ bụ na ọdịiche dị oke egwu a na-enye ike nke ihe ngwugwu ngwongwo dị obere karịa, nrụgide dị na akpa ahụ n'oge usoro ịgba ụlọ na-adị mfe ịkụda mgbe okpomọkụ rịrị elu. Njirimara nke akpa nri bụ na ọ na-atụ egwu ịrị elu ma ọ bụghị nrụgide; na iko plastik na karama na-atụ egwu ịrị elu na nrụgide, yabụ ọ dị mkpa iji usoro ịga ụlọ ọgwụ na-agbanwe agbanwe na nsị. Usoro a na-ekpebi na ọ dị mkpa ka a chịkwaa ọnọdụ sterilization na nrụgide ngwa agha iche iche na mmepụta nke nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe Ngwa ọrụ sterilization, dịka ụdị mmiri zuru ezu (ụdị mmiri ịsa ahụ), ụdị mmiri ịgba mmiri (ihe ịgba mmiri dị elu, ihe ịgba n'akụkụ, ịgba agba zuru ezu) uzuoku na ikuku inggwakọta ụdị nwoke ịga ụlọ ọgwụ, n'ozuzu setịpụrụ dị iche iche parameters site PLC maka akpaka akara.
Ekwesiri ikwusi ike na ihe anọ nke igwe nwere ike ichikota usoro (onodu mbu, uzo ogwu, oge, isi ihe) dikwa na nhichapu nke nri ndi mmadu na-agbanwe agbanwe, na nsogbu n'oge igba ogwu na usoro obi jụrụ na-achịkwa.
Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-eji ịgba ọgwụ mgbochi mmiri maka ọgwụ nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe. Iji gbochie akpa nri site na ịkụ, na-etinye ikuku na-agbakọ ikuku n'ime ite mmiri ọgwụ ahụ iji tinye ihe na-akpali akpali na akpa nkwakọ. Nke a bụ usoro sayensị ezighi ezi. Ebe ọ bụ na a na-eme nhichapụ uzuoku n'okpuru ọnọdụ uzuoku dị ọcha, ọ bụrụ na ikuku dị na ite ahụ, a ga-akpụ akpa ikuku, ikuku ikuku a ga-agakwa n'ime ite nwoke iji mepụta ụfọdụ ebe oyi ma ọ bụ ntụ oyi, nke na-eme ka ọnọdụ izu ụlọ enweghị aha, na-ebute ezughi oke nke ngwaahịa ụfọdụ. Ọ bụrụ na ị ga-agbakwunye ikuku agbakọtara, ịkwesịrị ịkwado ya na ọkpọka dị ike, na ike nke onye ofufe a ka ejiri nlezianya dozie iji kwe ka ikuku ọkụ na-amanye ikuku ọkụ ọkụ ozugbo ị banyechara ite ahụ. Ikuku na uzuoku na agwakọta, iji hu na onodu ogwu di na ite ogwu bu uzo, iji hu na onodu ogwu ogwu di na ngwaahịa a.
Post oge: Jul-30-2020